Emahostela okungenzeka angabi nawo amandla frills ukuthi amahhotela ahlinzeka. Ngakho kungase kube khona umshini ikhofi ngaphakathi egumbini lakho, cha insipho yamahhala, noma isiqandisi sakho. Ngeke ngisho ukuthola amathawula khulula. Kodwa abanye amahostela empeleni ukuthengisa insipho kanye nezinye izidingo ngentengo ezishibhile. futhi siqiniseke, cishe ngeke abe umbophi akho noma closet kumagumbi wabelane, kodwa abanayo ikhabethe lapho ungakwazi ukugcina izinto zakho. Ungase ube ukuletha ngokhiye akho Nokho. Uma isikhwama sakho likhulu kakhulu futhi ngemva ekuphumeni, usafuna ukwenza ngomzuzu wokugcina abanye indawo, ungakwazi ushiye isikhwama sakho esitolo umthwalo.
Kulungile, isiqiniseko, cishe ngeke uthole ubumfihlo efanayo obungenza ngayo ihhotela. Kukhona ezindaweni efana zangasese, emakhishini, izindawo lounge, nezindawo zokusebenza. Nokho, lokhu kuyindlela enhle ukuhlangana nabantu. Uma hang out kulezo ndawo ungase ukuhlangabezana abagibeli abavela kulo lonke emhlabeni wonke. Futhi ngisho ukuqala ubungane obuhle nabantu esihlangana nabo yakho yohambo futhi ube elisha lesikhathi esizayo travel buddies, kakhulu! Abantu abasebenzela emahostela abantu ngokuvamile kumnandi futhi nobudlelwano, ngakho-ke kuhle ukuba ihlangane bese uxhumana nabo, kanjalo.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fenjoying-a-guilt-free-trip-hostel-accommodation%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
UKarina Santos - ungumama womfana oneminyaka emibili, nonkosikazi. Usuku lwakhe lugcwele amanabukeni nama-imeyili. Ngokwalesi sizathu, usethole izinga elisha ngokuphelele lemisebenzi eminingi. Izinsuku zakhe zamasonto ikakhulu zigxile emsebenzini, nomndeni. Uthanda ukuchitha izimpelasonto zakhe nengane yakhe futhi ehamba nezinsuku zobusuku nomyeni wakhe. - Ungakwazi uchofoze lapha ukuze ngithinte